ငါသွားမယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘေးကင်းမယ်
ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၁
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း ပုံ ငါဟုတ်ကဲ့သွားပေမယ့်ဘေးကင်းပါတယ်
အားလပ်ရက်များအတွက်စာအုပ်ဆိုင်နှင့်ထားခဲ့ဖို့အဆင်သင့်။ ဆန္ဒကအဲဒီမှာရှိပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့လေယာဉ်နဲ့ဟိုတယ်တွေဘွတ်ကင်လုပ်ဖို့အမြဲတမ်းကြောက်ကြတယ်။ ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော Covid-19 ကူးစက်မှုသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလောက၏အထူးသဖြင့်ဟိုတယ်ကဏ္ affected ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ထားသည့်အချက်အလက်များအရအီတလီနိုင်ငံရှိဟိုတယ်စျေးကွက်သည်အဆောက်အအုံပေါင်း ၃၃၀၀၀ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးဖျက်သိမ်းမှုများပြားလာခြင်းနှင့်ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းများကျဆင်းခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ခရီးသွားသူများ၏လိုအပ်ချက်အသစ်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် Europ Assistance သည်ဟိုတယ်နှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားအထူးအာမခံထားသည့်ဟိုတယ်လုံခြုံမှုအစီအစဉ်ကို has ည့်သည်များအားလုံခြုံစိတ်ချရသောနေထိုင်မှုကိုအာမခံပေးသည်ကိုသိရခြင်းကကောင်းသည်။ ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ၂၄ နာရီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များကိုပြန်လည်ပေးခြင်းနှင့်တစ် ဦး တည်းနေထိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ဟိုတယ်တွင်သက်တမ်းတိုးခြင်းသို့မဟုတ်စောစီးစွာရပ်တန့်ခြင်းများအတွက်ပြန်လည်လျော်ကြေးပေးခြင်းဖြင့်၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသော modular လွှမ်းခြုံမှုဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်။ သိသာထင်ရှားသည့်အချက်များအားလုံးသည် Covid-24 ဖြစ်ရပ်တွင်လည်းသေချာသည်။ အစီအစဉ်သည်အကာအကွယ်အပြည့်အ ၀ ရှိပြီးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် both ည့်သည်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးများပေးသည်။ ဒုတိယတစ်ခုကလုံခြုံစွာခရီးသွားခြင်း၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအားလပ်ရက်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ခြင်းနှင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၏ရှုပ်ထွေးမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကိုအာမခံသည်။ Covid-19 ရန်။
စိတ် ၀ င်စားမှုမရှိဘဲခရီးသွားလိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ တန်ဖိုးနှင့်သီးသန့်ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးစွမ်းသည်။
“ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလောကသည်ရှုပ်ထွေးသောပြောင်းလဲမှုနှင့်အပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့ရသည့်အချိန်တွင်အော်ပရေတာများနှင့်သူတို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အသစ်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခရီးသွားလိုအပ်ချက်အပြောင်းအလဲနှင့် Europ Assistance သည်ခရီးသွားများနှင့်အိမ်ရှင်များကိုဂရုစိုက်ပြီးအကူအညီများကိုပြန်လည်တီထွင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟိုတယ်များနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ဒီဇိုင်းအသစ်ကိုဖန်တီးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ လုံခြုံမှု၊ အကာအကွယ်နှင့်နှစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေသည်” ဟု Europ Assistance Italia မှ Travel & Personal Officer ဖြစ်သူ Mauro Cucci ကပြောကြားသည်။
ဆောင်းပါး ငါဟုတ်ကဲ့သွားပေမယ့်ဘေးကင်းပါတယ် အပေါ်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ဟန်ရှိသည် Vogue Italia.
ယခင်ဆောင်းပါးမွေးနေ့အတွက်ပန်းများ - အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ရန်!
Valentine's Day အတွက်အတွင်းခံအဝတ်အစားကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ
ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2021
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်သင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤ site သည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာ cookies များ၊ လူမှုရေး cookies များနှင့် third-party ပရိုဖိုင်း cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤနဖူးစည်းစာတန်းကိုပိတ်ခြင်း၊ ဤစာမျက်နှာကိုလှိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် cookies များကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူသည်။ Okအဘယ်သူမျှမကွတ်ကီးမူဝါဒ၏တိုးချဲ့ထားသောဗားရှင်း